दिन प्रतिदिन, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
"तर त्यहाँ क्रूसमा टाँगिएको ठाउँमा एउटा बगैचा थियो र बगैंचामा एउटा नयाँ क्रिप्ट थियो जसमा कसैलाई कहिलै पनि राखिएको थिएन" यूहन्ना १ :19: 41१। बाइबलीय इतिहासमा धेरै महत्वपूर्ण क्षणहरू घटनाहरूको प्रकृति प्रतिबिम्बित हुने ठाँउहरूमा भएको थियो। यस्तो पहिलो क्षण एउटा सुन्दर बगैंचामा भयो जहाँ परमेश्वरले आदम र हव्वालाई राख्नुभएको थियो। निस्सन्देह, अदनको बगैंचा विशेष थियो किनकि यो भगवान थियो ...
र पढ्नुहोस् □
परमेश्वरले के प्रकट गर्नुहुन्छ त्यसले हामी सबैलाई असर गर्छ
यो वास्तवमा शुद्ध अनुग्रह हो कि तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छ। तपाईं आफैंले केहि गर्न सक्नुहुन्न तर भगवान्ले तपाईंलाई दिनुहुने आत्मविश्वाससँग स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईंले केहि गरेर यो कमाएको छैन; किनकि उहाँ चाहानुहुन्छ कि कोही उहाँसामु आफ्नै उपलब्धिहरूमा भर पर्न सक्ने छैन (एफिसी २.–-G-जीएन)। जब हामी इसाईहरूले अनुग्रहलाई बुझ्न सिक्छौं तब यो विवेकले हामीमा दबाब र तनावलाई हटाउँदछ। यसले हामीलाई बनाउँछ ...
"किनभने उनले आफैंले भनेका थिए:" म निश्चय पनि तपाईबाट मेरो हात तान्न चाहन्न र म निश्चय पनि तिमीलाई छोड्न चाहन्न "(हिब्रू १ 13, Z ज़ब)। यदि हामी आफ्नो बाटो देख्न सक्दैनौं भने हामी के गर्छौं? यो जीवनले ल्याउने चिन्ता र समस्याबिना सम्भवतः सम्भव छैन। कहिलेकाँही यी सहन सजिलो छ। जीवन, यो अस्थायी रूपमा अन्याय छ जस्तो देखिन्छ। किन यस्तो छ? हामी त्यो जान्न चाहन्छौं। धेरै अप्रत्याशित ...
प्रार्थना किन, जब परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ?
"प्रार्थना गर्दा, तपाईंले खाली नचिनेका शब्दहरू अन्यजातिहरूलाई जो भगवानलाई चिन्दैनन् सँगसँगै घुमाउनु हुँदैन। उनीहरू सोच्दछन् कि यदि तिनीहरूले धेरै शब्दहरू भनेका छन् भने उनीहरू सुन्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई जस्तो नगर्नुहोस्, किनभने तपाईका पितालाई तपाईलाई के चाहिन्छ भनेर थाहा छ, र हो तपाईंले उहाँलाई सोध्नु अघि "" (Mt 6,7-8 NGÜ)। कसैले एकपटक सोधे, "जब उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ म किन परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ?" प्रभुको प्रार्थना को परिचय को रूप मा माथिको भनाइ येशूले गर्नुभयो। भगवान सबै कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँको आत्मा जताततै छ।
"मैले उसलाई अँगालो हालेर राखें। तर इस्राएलका मानिसहरूले बुझेनन् कि उनीहरूलाई भएका सबै राम्रा चीजहरू मबाट नै आएका हुन् "(होशे ११: 11 एचएफए)। मेरो उपकरणको केसमा रमाइ While गर्दा, म पुरानो सिगरेट प्याकेट भेटें, सायद १3.० को दशकबाट। यो खोलिएको थियो ताकि सबै भन्दा ठूलो सम्भव क्षेत्र सिर्जना भयो। त्यहाँ तीन-पोइन्ट कनेक्टरको रेखाचित्र थियो र यसलाई कसरी तार गर्ने निर्देशनहरू थियो। Who…
चर्च उसको शरीर हो र उहाँ त्यसमा पूर्णरूपले बस्नुहुन्छ। जसले आफ्नो उपस्थितिमा सबै थोक र सबैलाई भर्नुहुन्छ (एफिसी १:२:1)। गत वर्ष हामीले एक राष्ट्रको रूपमा हाम्रो अस्तित्व सुनिश्चित गर्न युद्धको समयमा सबैभन्दा ठूलो त्याग गर्नेलाई सम्झ्यौं। सम्झनु राम्रो छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, यो परमेश्वरको मनपर्ने शब्दहरूमध्ये एक हो जस्तो देखिन्छ किनभने उसले यसलाई धेरै चोटि प्रयोग गर्छ। उहाँ निरन्तर हामीलाई जराका बारे सावधान हुन र ...
बारम्बार, परमेश्वरले हाम्रा पुर्खाहरूलाई अगमवक्ताहरू मार्फत विभिन्न तरिकामा कुरा गर्नुभयो। तर अब, पछि, परमेश्वरले हामीसँग उनको छोरो मार्फत बोल्नुभयो। उहाँद्वारा नै परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र उहाँलाई सबै थोकका हकदार बनाउन पनि प्रयोग गर्नुभयो। छोराले आफ्नो बुबाको ईश्वरीय महिमा देखाउँदछ, किनकि ऊ पूर्ण रूपमा परमेश्वरको स्वरूपमा छ (हिब्रू १: १- 1,1-3 एचएफएलाई पत्र)। सामाजिक वैज्ञानिकहरूले शब्दहरू प्रयोग गर्छन् जस्तै ...
"यो वास्तवमा शुद्ध अनुग्रह हो कि तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छ। तपाईं आफैंले केहि गर्न सक्नुहुन्न तर भगवान्ले तपाईंलाई दिनुहुने आत्मविश्वाससँग स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईंले केहि गरेर यो कमाएको छैन; किनभने परमेश्वर चाहानुहुन्छ कि कोही उहाँसामु आफ्नै उपलब्धिहरू उल्लेख गर्न सक्षम होस् भन्ने छैन "(एफिसी २,--G जीएन)। पावलले लेखे: “प्रेमले छिमेकीलाई हानि गर्दैन; त्यसैले अब व्यवस्थाको प्रेम पूरा भएको छ »(रोमी १:2,8:१० ज्युरिख बाइबल)। यो चाखलाग्दो छ कि हामीबाट ...
"किनकि हाम्रो निस्तारको थुमा हाम्रो निम्ति मारिएको छ: ख्रीष्ट" (१ कोरिन्थी::))। हामी लगभग ,1,००० वर्ष अघि इजिप्टमा भएको महान् घटनालाई बेवास्ता गर्न चाहँदैनौं, जब परमेश्वरले इस्रायललाई दासत्वबाट स्वतन्त्र गर्नुभयो। प्रस्थानमा वर्णन गरिएका १० विपत्तिहरू फिरऊनको अट्टेरी, घमण्डी र परमेश्वरप्रति अहrog्कारी प्रतिरोधलाई हल्लाउनु आवश्यक थियो। निस्तार-चाड अन्तिम र अन्तिम प्लेग थियो ...
"यसकारण, स्वर्गीय बोलावटमा भाग लिने पवित्र भाइबहिनीहरू, हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र प्रधान पुजारी, येशू ख्रीष्टलाई हेर्" (हिब्रू:: १)। धेरै मानिसहरूले स्वीकार्दछन् कि क्रिसमस एक उत्कट, व्यावसायिक चाड हो - यद्यपि येशू सामान्यतया बिर्सनुभयो। खाना, दाखमद्य, उपहार र उत्सवहरूमा जोड दिइन्छ; तर के मनाइन्छ? ईसाई भएको नाताले हामीले किन भगवान उहाँको हो भनेर सोच्नु पर्छ ...
म फर्कनेछु र सधैंभरि रहनेछु!
“यो सत्य हो कि म जाँदैछु र तपाईंको लागि ठाउँ तयार पार्दछ, तर यो पनि सत्य हो कि म फेरि आउँछु र तिमीहरूलाई मकहाँ लैजान्छ ताकि तपाईं म भएको ठाउँमा जानुहुन्छ (यूहन्ना १ 14,3..XNUMX)। के तपाईसँग कहिल्यै यस्तो चीजको लागि गहिरो इच्छा छ जुन चाँडै आउँछ? सबै इसाईहरू, प्रथम शताब्दीमा समेत उनीहरूले ख्रीष्टको आगमनको चाह गरे, तर ती दिनहरूमा र त्यस युगमा उनीहरूले एक साधारण अरामी प्रार्थनामा व्यक्त गरे: "मारानाथा", जसको अर्थ हो ...
"सबैजना तपाईलाई आशै हेर्छन र तपाईले ठीक समयमा खाना दिनुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो हात खोल्नुहोस् र तपाईंको प्राणीहरू भर्नुहोस् ... "(भजन १ 145, १ 15-१-16 HFA)। कहिलेकाँही म भित्र गहिरो चिच्याइएको भोक महसुस गर्छु। मेरो विचारमा म उसलाई बेवास्ता गर्न चाहन्छु र केहि समयको लागि उनलाई दबाउन। तर अचानक ऊ फेरि प्रकाशमा आउँछ। म इच्छाको कुरा गर्दछु, हामीभित्रको इच्छालाई गहिराई बुझ्नको लागि, कराई ...